Soo iibso budada J147 (1146963-51-0) Soosaarayaasha & Warshadaha
Budada J-147 waa daawo tijaabo ah oo cusub oo loo soo saaray sida ugu macquulsan ee loogu daaweyn karo cudurka Alzheimer. Ilaa hadda, tijaabooyinka lagu sameeyay jiirarka waxay muujinayaan ballanqaad badan. J147 waxay soo bandhigtay saameynta dib ugu laabashada saamaynta waallida iyo cudurka 'Alzheimer' ee moodooyinka jiirka. J147 waxay qaadataa qaab ka duwan kan kale marka loo barbar dhigo daawooyinka kale ee loo yaqaan 'Nootropics' iyo 'Alzheimer'. J147 wuxuu isku dayaa inuu ka saaro kaydadka huurada ee maskaxda. Baarayaasha sidoo kale waxay ogaadeen in J147 ay leedahay awood ay wax kaga qabato dhowr arrimood oo kale oo gabowga noolaha ah, oo aan ahayn xasuusta oo kaliya. Daawadu waxay kaa caawin kartaa kahortaga qulqulka dhiigga microvessels, sida lagu muujiyey tijaabooyinka jiirarka ilaa hada la sameeyay. Daawada waxaa markii ugu horreysay la sameeyay 2011. Tan iyo markaas, baaritaanno ayaa lagu sameeyay jiirarka laakiin maanaan arag tijaabooyin ballaaran oo caafimaad oo ku saleysan aadanaha. Si kastaba ha noqotee, cilmi-baarisyada qaarkood oo la daabacay sannadkii hore ayaa sawir aad u wanaagsan oo ah sida J147 uga dhex shaqeeya maskaxda aadanaha. Sida ku xusan warqadda, dawadu waxay kuxiran tahay borotiinka mitochondria. Unugyada 'Mitochondria' badanaa waxay mas'uul ka yihiin sameynta tamar. Ficilka J147 ee iyaga lagu xoojinayaa dib u cusboonaysiinta unugyada. Dib-u-cusboonayntani waxay muhiim u tahay dib-ula-noqoshada xusuusta iyo kor u qaadista guud ahaan caafimaadka garashada.
Budada J147 (1146963-51-0) fiidiyow
Macluumaadka Saldhigga budada ee J147
magaca Budada J147
Magaca kiimikada 2,2,2-Trifluoroacetic acid 1-(2,4-Dimethylphenyl)-2-[(3-methoxyphenyl)methylene]hydrazide
Isku mid ahaanshaha N- (2,4-Dimethylphenyl) -2,2,2-trifluoro-N '- [(E) - (3-methoxyphenyl) methylene] acetohydrazide
Formula kelli C18H17F3N2O2
Miisaanka kelli 350.341 g / mol
Dhibicda Biyaha 177-178 ° C
Muhiimadda InChI HYMZAYGFKNNHDN-SSDVNMTOSA-N
Imaanshaha Caddaan budada cad-cad
Nolosha badh 1.5 saac oo ku jirta plasma iyo maskaxda 2.5 saacadood
milmi Ku dhib 100MM gudaha DMSO iyo ilaa 100 mM oo ethano ah
kaydinta Xaaladda Ku kaydi at + 4 ° C
Codsiga Daawooyinka tijaabada ah oo leh saameyno la soo sheegay oo ku saabsan cudurka Alzheimer iyo gabowga moodooyinka moodeelka ee gabowga.
Waa maxay budada J147?
Sidaan horeyba kor ugu soo xusnay, budada J-147 waa daawo tijaabo ah. Si kale haddii loo dhigo, wali lagama heli karo baaxad weyn oo suuqa ah welina waxaa jira dhinacyo badan oo wali aan wali la dhisin. J147 waxaa loo arkaa inay tahay suurtagal daaweynta Alzheimer laakiin waxaa loo suuqgayn karaa guud ahaan ka hortagga gabowga.
J147 wuxuu ku socday horumar ilaa 2011. Cilmi baaris ku saabsan shaqooyinka daroogada ayaa weli ah mid aad u xasaasi ah. Laakiin waxaan ognahay inay gacan ka geysaneyso dib u soo nooleynta unugyada maskaxda iyadoo lagu xirayo borotiinka mitochondria. Intaa waxaa sii dheer, dhammaan daraasadihii lagu sameeyay saameynta J147 waxay ku jireen moodooyinka jiirka. Ilaa ay ka jiraan tijaabooyin bini-aadam oo J147 oo buuxa, weli waxaa jira waxyaabo badan oo suuragal ah in la qaawiyo. Isku-duwaha J147 wali waa socdaa oo dawada waxaa laga heli karaa onlayn.
Sidee J147 U Shaqeysaa
In kasta oo cilmi baaris ku saabsan shaqada J147 sida Nootropics ay wali si tartiib tartiib ah uga soo baxeyso, saynisyahano ayaa durba awood u yeeshay inay muujiyaan inay u shaqeyso iyaga oo adeegsanaya ATP, nooc ka mid ah borotiinka laga helay mitochondria. Sida laga soo xigtay cilmi-baarayaashu, markii J147 lagu soo rogay mitochondria, neurons-ka maskaxda ayaa laga ilaaliyay sunta oo badanaa la xiriirta da'da. Baarayaasha sidoo kale waxay ogaadeen in J147 ay kicineyso wax soo saarka jirka ee kor u kaca ee ATP. Daawadu sidoo kale waxay kaa caawin kartaa xasilinta cudurka mitochondria, waa cunsur muhiim u ah la-dagaallanka gabowga.
Muhiimadda ficiladan ayaa muhiim u ah hal sabab. Tani waa sababta kaliya ee ugu weyn ee cudurka 'Alzheimer', waallida, iyo xanuunnada kale ee garashada waa gabow. Helitaanka hab loo yareeyo ama dib loogu celiyo waxyeelada maskaxda ku dhacda waxay ku yeelan kartaa saameyn weyn oo togan xagga daaweynta Alzheimer. J147 ayaa sidoo kale loo adeegsaday in lagu beegsado dhisitaanka borotiinka beta-amyloid. Uruurinta badan ee borotiinkan bukaannada Alzheimer ayaa lagu soo sheegay cilmi-baaris hore.
Waxaa kale oo jira caddeyn laxiriirta canbaarayntaan iyo ciladaha maskaxda ee xumaaday sida Alzheimer, cudurka Parkinson iyo kuwa kale. J147 Nootropic waxay ujeedadeedu tahay inay ka saarto ururinta bakteeriyada beta-amyloid, taas oo iyana gacan ka geysan karta in laga laabto ama laga hor tago horumarka cudurka Alzheimers iyo arrimaha kale ee garashada. Waxa runtii J147 ka dhigaya daawo aad u dhiirrigeliya waa xaqiiqada ah in ay daaweyn karto dhammaan noocyada ciladaha maskaxda ee xumaanaya.
Waqtigan xaadirka ah, waxaad u baahan tahay dawooyin kaladuwan oo loogu talagalay ciladaha maskaxda ee kaladuwan. Asal ahaan, waxaad u heli doontaa daawo loogu talagalay Alzheimer, Parkinson's, iyo kuwa kale. Laakiin J147 wuxuu noqon karaa daaweyn cudurradan oo dhan. Nooc keliya oo dawooyin ah oo daweyn kara dhawr cudur oo neerfaha ah ayaa noqon kara beddel-ciyaar, iyo J147 waxay umuuqataa inay run ahaantii samayn karto.
J147 Faa'iidooyinka iyo Isticmaalka
J147 waxay leedahay faa iidooyin badan. Daawadan ayaa hada loo soo saaray sidii loo daaweyn lahaa cudurka Alzheimers laakiin waxay bixisaa faa iidooyin dheeraad ah oo macquul ah sidoo kale.
Waxaa laga yaabaa inay lasocdo Xanuunnada Maskaxda ee Deg-Degga ah
J147 wuxuu muujiyey ballanqaad badan oo ku saabsan dib-ula-noqoshada saamaynta dhibaatooyinka maskaxda ee maskaxda sida Alzheimer iyo kuwa kale. Baadhitaanno lagu sameeyay moodooyinka jiirka illaa hadda, dawadu waxay muujisay saameyn aad u wanaagsan oo la tacaalidda xaaladahaas.
J147 wuxuu u shaqeeyaa isagoo caawinaya unugyada maskaxda inay dib u soo nooleeyaan, iyagoo ka dhigaya kuwo ka da 'yar oo ka shaqeeya wax ka badan unugyada duqoobay. Si kastaba ha noqotee, waxaa muhiim ah in la ogaado in tijaabooyin aadane aan lagu qaban waxyeelada J147. Waxaan rajeyneynaa, inay taasi dhici doonto dhawaan laakiin dawada ayaa wali lagu heli karaa iib ahaan iyada oo ah budo ah iibiyaasha internetka laga soo xulay.
Waxay wanaajisaa Tallaabada Mitochondria iyo Longevity
J147 wuxuu ku shaqeeyaa adoo ku xidhma mitochondria, unugyada ka masuulka ah abuurida tamar jirkeena. Ficilka J147 wuxuu gacan ka geystaa ka hortagga walaaca ku dhaca jirka ee unugyada mitochondria, taasoo horseedda shaqada unugyada oo sii fiicnaata iyo cimri dheer.
J147 sidoo kale waxay gacan ka geysaneysaa yareynta metabolites-ka sunta ee sababi kara xad-dhaafka unugyada, habka ay unugyadu u dhintaan iyagoo aad u kacsan. Tani waxay u oggolaaneysaa unugyadaada inay sii ahaadaan kuwo caafimaad qaba waqti dheer. Xaqiiqdii, dariiqooyinka qaar ee lagu sameeyo maaddooyinka xayawaanka waxay muujiyeen in maamulka J147 ee ku saabsan duqsiyada miraha ay dheereysteen cimrigooda 9.5 ilaa 12.8%.
Waxay wanaajisaa Xusuusta
J147 ayaa sidoo kale muujiyay ballanqaadyo badan oo ka mid ah moodooyinka jiirka tijaabada ah ee kor u qaadista xusuusta. Daawadu xitaa waxay gacan ka geysatay sidii loo soo celin lahaa cilladaha daran ee garaadka ee maaddooyinka imtixaanka hore inta lagu jiray daraasadaha cilmi baarista.
Baarayaasha waxay rumeysan yihiin in saameyntan lagu soo celin karo maadooyinka aadanaha. Waxa kale oo jira caddaymo muujinaya in J147 loo isticmaali karo sahamin suurta gal ah oo ku saabsan xusuusta xayawaanka.
Waxay ilaalisaa neerfayaasha waxayna caawisaa koritaanka maskaxda
J147 sidoo kale waxay leedahay astaamo neuroprotective oo ka hortagaya ficil sunta unugyada dhexdooda. Tani waxay ka caawineysaa ka badbaadinta neerfayaasha dhaawaca. J147 sidoo kale waxay noqon kartaa aasaaska kobaca maskaxda. J147 ayaa sidoo kale horumarin kara caaga maskaxda ee synaptik, taasoo horseedi karta koritaanka.
Sida loo isticmaalo J147
Maadaama J147 uu wali yahay dawo tijaabo ah, ma jirto hab lagu ogaado qiyaasta qumman ee ilaa hada. Sidoo kale ma jiro hab lagu ogaado sida loo sameeyo J147. Ka sokow, maanaan arag tijaabooyin caafimaad oo ah J147 aadanaha.
Si kastaba ha noqotee, daroogadu waa kaabis afka ah oo firfircoon, taas oo la micno ah in loo baahan yahay in afka laga qaato. Imtixaannadii tijaabada ee J147 ee lagu sameeyay jiirarka, maaddooyinka imtixaanka waxaa lagu daaweeyay qiyaasta J147 oo ah 10 mgs oo kiiloogaraam ah culeyska jirka maalintii. Kani maahan dawo caadi ah. Way fiicnaan laheyd inaad la tashato dhaqtarkaaga kahor intaadan bilaabin isticmaalka J147.
J147 iyo Curcumin
J147 run ahaantii waa nooc la beddelay oo ah curcumin, molecule oo laga helo turmeric. Curcumin ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay lala xiriirinayay inuu sii fiicnaanayo shaqada maskaxda. Moleekuleyaasha ayaa mas'uul ka ah kor u qaadista heerarka BDNF, oo ah nootropic maskaxda ka dhasha oo laga yaabo inay lagama maarmaan u noqoto dib u noqoshada xanuunnada garashada.
Baadhitaankii ugu dambeeyay ee J147
Mid ka mid ah daraasadihii ugu dambeeyay ee ku saabsan J147 wuxuu eegaa ficilada daroogada ee heer unug. Waraaq la daabacay 2018 ayaa lagu caddeeyay in J147 ay ku shaqeyso iyada oo lagu xidho borotiin ah mitochondria.
Tallaabadan ayaa la sheegay inay leedahay awoodo dib-u-cusboonaysiin ah oo ku saabsan unugyada maskaxda. Cilmi-baarisyada qaarkood ayaa sidoo kale lagu sameeyay moodellada jiirka ee la xiriira J147 iyo kartideeda lagu daaweyn karo cudurka Alzheimers iyo dhibaatooyinka kale ee maskaxda ku dhaca. Waxay ahayd mid balanqaad badan leh.
J147 Powder Iibsada
Curcumin derivative J147 waxaa loo heli karaa sidii budo ah alaab-qeybiyaha xulashada leh ee khadka tooska ah ee internetka. Si kastaba ha noqotee, waxaa muhiim ah in taxaddar dheeraad ah la yeesho kaliya si loo helo sheyga saxda ah. Bixiyeyaasha budada 'Nootropics' oo waxoogaa iibinayay waa inay noqdaan kuwa ugu sarreeya liiskaaga.
Fiiri faallooyinka kale ee adeegsadayaasha sidoo kale. Waxaad dooneysaa inaad ka soo iibsato iibiyaasha leh dib u eegisyo badan oo togan 12kii bilood ee la soo dhaafay ama wax ka badan. Qiimaha J147 sidoo kale wuxuu ku kala duwan yahay mid iibiya ilaa kan xiga.
J147 (1146963-51-0) Tixraac
“Daawada tijaabada ah ee lagu bar tilmaameedsanayo cudurka Alzheimers waxay muujineysaa saameynta gabowga” (War-saxaafadeed). Machadka Salk. 12 Nofeembar 2015. Waxaa dib loo helay November 13, 2015.
Joshua Goldberg et al. Isku-darka 'mitochondrial ATP synthase' waa bartilmaameedka daawada ee loogu talagalay gabowga iyo waallida. Waayeelka gabowga, 2018 DOI: 10.1111 / acel.12715
Hydrafinil (9-Fluorenol) budada (1689-64-1)/li>